Ra'iisul Wasaaraha Canada oo raaligelin ka bixiyay sawirka "wejiga bunniga ah" ee 2001-dii - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaRa’iisul Wasaaraha Canada oo raaligelin ka bixiyay sawirka “wejiga bunniga ah” ee 2001-dii
Ottawa (JigjigaOnline) – Ra’iisul Wasaaraha dalka Canada, Justin Trudeau ayaa raalligelin ka bixiyay in uu marsaday midabka “wejiga bunniga ah” ee gala ee uu kusoo bandhigay iskuul gaar ah, kaas oo 20 sano ka hor uu dhigan jiray.
Wuxuu xirtay “weji madow” wuxuuna ku heesay Day-O, oo ah hees Jamaican ah oo caan ah, taas oo uu qaaday fannaanka Amerikaanka ah ee xuquuqda rayidka u ol’oleynayay, Harry Belafonte.
Mustafa Farooq, Agaasimaha fulinta ee Golaha Muslimiinta ee Canada, ayaa yiri: “In la arko Ra’iisul wasaaraha oo xiran Wejiga bunniga/madowga ah waa murugo weyn. Waa arrin cambaareyn mudan, waa dib u maqlidda taariikhda cunsuriyadda iyo beenta la aaminsanaa, taas oo aan la aqbali karin.”
Wuxuu golaha intaa ku daray in ay garan karaan “in dadka ay isku bedeli karaan 20 sano gudahood”. xoogaa ka dib waxay soo saareen farriin Tweet ah oo ay ugu mahadceliyeen Mr Trudeau, maadaama uu si degdeg ah raaligelin u bixiyay.
“Waxa maanta ay dadka Canada arkeen waa go’aan la’aan guud iyo sharaf la’aan, waana qof aan u qalmin in uu dalkan hoggaamiyo,” ayuu yiri.
Hoggaamiyaha Xisbiga New Democratic, Jagmeet Singh, oo haysta diinta Sikh, wuxuu isaguna sheegay in sawirka uu yahay “dhib” iyo “aflagaado”.
“Markasta oo la maqlo tusaalooyiinka wejiga bunniga ama madowga ah, waxay noqoneysaa ku jeesjeesidda qof waxa uu ku nool yahay iyo khibradda nolosha uu ka haysto,” ayuu yiri Mr Singh oo saxafiyiinta kula hadlay ol’ole uu ku qabtay Toronto.
Jagmeet Singh – oo si furfuran uga hadlay cunsuriyadda uu kala kulmay Canada-da oo uu ku barbaaray – wuxuu qoray in taasi “aysan ku saabsanayn oo keli ah ra’iisul wasaare”.
“Tani waxay la xiriirtaa qof kasta oo dhallinyar oo loogu jeesjeesay midabkiisa aawadii, sidaasna waxaa sameeyay canugga madaxa ay ugu duuban tahay cumaamadda.”